Twitter wuxuu ka shaqeynayaa inuu barnaamijkiisa u keeno Apple TV | Wararka IPhone
Tan iyo markii uu yimid aasaasihii hore ee Twitter-ka, Jack Dorsey, jagada agaasimaha guud ee shirkadda, shirkaddu waxay soo kordhineysaa adeegyo cusub iyo sidoo kale inay soo bandhigeyso barnaamijyo cusub oo ay ka go'an tahay nidaamkeeda deegaanka, sida Periscope. Laakiin imaatinka fiidiyowyada, ama sahanno, ama GIFs hwaxay ku guuleysteen inay shirkadda microblogging ku darto kuwa raacsan oo cusub oo xilligan ay wali ku xayiran tahay 300 milyan oo isticmaale. Jack Dorsey tuurista shukumaanka oo wuxuu sii wadaa inuu ku daro howlo cusub oo heshiisyo la gaaro isticmaalka Twitter si uu caan u noqdo.
Twitter wuxuu iskudayey dhowr bilood inuu heshiis la gaaro CBS, Major League Baseball Association, Wimbledon, NFL ... inaad awood u yeelatid inaad si toos ah barnaamijyadaada si toos ah uga baahiso barnaamijyadaada, ama iyada oo loo marayo Periscope ama fiidiyowyada ay shabakadda microblogging u oggolaato in lagu daro. Noocan noocan ah wuxuu noqon lahaa mid ugub ah oo ka dhigaya shirkadda inay kororto tirada dadka isticmaala maadaama ay bixin lahayd qaab aad u raaxo iyo fudeyd leh oo lagu raaco wararka ugu muhiimsan iyo / ama dhacdooyinka isboortiga oo si raaxo leh uga socda taleefannadeenna casriga ah, kiniiniga, kumbuyuutarka Apple TV.
Twitter wuxuu la shaqeynayaa gacan-qabad Apple iyo bilow barnaamij tvOS-ku habboon, si markaa adeegsaduhu si raaxo leh uga arki karo jadwalkooda jadwalka fadhiga qolka ay ku nool yihiin, iyo sidoo kale inuu ku raaxeysan karo tabinta ay ku soo bandhigayaan Twitter ama Periscope. Xaqiiqdii, lamaanaha koowaad waa NFL, kaas oo u oggolaan doona toban ciyaarood in la bixiyo laga bilaabo Sebtember 15, taas oo ah in ka badan sabab ku filan in dad badan oo isticmaala ay bilaabaan inay furaan koontada shabakaddan bulshada, gaar ahaan haddii ay sidoo kale leeyihiin Apple TV si aad ugu raaxeysato si weyn.
Facebook ayaa sidoo kale iftiiminaysay doorashadan, laakiin Haddana Twitter-ka ayaa horey u socday sidii ay ku dhacday markii la bilaabay tabinta tooska ah ee loo maro Periscope. Horumarinta barnaamijka ayaa lagu soo waramayaa inuu sifiican u horumarey ujeedka labada shirkadoodna ay tahay inay soo bandhigaan kahor taariikhda hawada ee cayaaraha NFL ee ugu horeeya, sidaa darteed waxay u badan tahay inta lagu gudajiro bisha Sebtember, ee ah in iPhone cusub la soo bandhigi doono. , oo ay weheliso warar dheeraad ah oo ku saabsan nidaamyada kala duwan ee Apple, shirkadda ku taal Cupertino ayaa si gaar ah u xusaysa barnaamijkan cusub ee Apple TV.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Shirkadda Twitter ayaa ka shaqeyneysa sidii ay barnaamijkeeda u keeni lahayd Apple TV
WhatsApp waa la cusbooneysiiyaa iyadoo lagu darayo fariin cod ah
Netflix ama Yomvi, waxaan wajahnaa codsiyada iPad-ka